भोकै पेटमा हिडिरहेका यात्रुहरुलाई चितवनका युवाहरुले खाना यसरी खुवाउँदैछन्..हेर्नुहोस!::Point Nepal
भोकै पेटमा हिडिरहेका यात्रुहरुलाई चितवनका युवाहरुले खाना यसरी खुवाउँदैछन्..हेर्नुहोस!
चैत ११ गतेदेखि सरकारले ल,कडाउन घो,षणा गरेपछि धेरै मानिस आफू कार्यरत स्थानमै रोकिए । सबैभन्दा धेरै संघीय राजधानी काठमाडौंमा लकडाउनका का,रण धेरै मजदुर अ,लपत्र परे । दैनिक ज्यालादारी गरेर जिविकोपार्जन गरिरहेका मजदुरहरु अहिले खाद्यान्न जोहो गर्न नसक्दा हिडेरै आफ्नो गाउँफर्कन बाध्य भएका छन् ।
अहिले दिनहुँजसो काठमाडौं र पूर्वदेखि पश्चिमका मानिसहरु हिडेरै आफ्नो गन्तव्यमा जान थालेका छन् । त्यसरी तीन चार दिन लगाएर चितवन आइपुग्ने मानिसहरुलाई धेरैजसो भोकै भेटमा भेटिन्छन् । यही अवस्थालाई ध्यानमा राखेर चितवनका युवाहरुले खुवाउन खुवाउने अभियान सुरु गरेको छन् ।
नेपाली युवा उद्यमी मञ्च चितवनका युवाहरुले नारायणगढस्थित पुलचोकमा टेण्ट टाँगेर खाना खुवाउँदै आइरहेको छन् । चैत २३ गतेदेखि नै उनीहरुले बाटोमा हिडिरहेकाहरुलाई बोलाएर खाना खुवाउँदै आइरहेका छन् ।
मञ्चका अध्यक्ष दाताराम घिमिरेले निकै पिडादायी अवस्थामा विपन्न व्यक्तिहरु हिडेरै गन्तव्यमा पुगेको देखेर खाना खुवाउन थालेको बताए । उनले भने–‘धेरै कठिन अवस्थामा मजदुरहरु भोकै पेटमा टाँढा टाँढा जाँदै गरेको देखे, त्यस्तो अवस्था देखेपछि हामी दैनिक खाना खुवाउने निर्णमा पुगेका हौं ।’